नबिल बैंक लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, ३० फागुन २०७५)
निजीक्षेत्रको पहिलो बैंकको रूपमा स्थापित नबिल बैंकले गतवर्षको वार्षिक साधारणसभा फागुन २७ गते सम्पन्न गरेको छ । गतवर्षको मुनाफाबाट शेयरधनी लगानीकर्ताका लागि १२ प्रतिशत बोनस र २२ प्रतिशत नगद गरी ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । पारित बोनस वितरणपछि बैंकको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ८४ लाख ८ हजार पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय अवस्थालाई आधार मान्दा बैंकको वितरण योग्य नाफा रू. २ अर्ब ४ करोड ५० लाख ४८ हजार छ ।
हाल एक केन्द्रीय कार्यालयसहित ७४ ओटा शाखा कार्यालय र ११६ एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । समीक्षा वर्षमा २२ ओटा नयाँ शाखा थप गरेको बैंकले यस मध्य १२ ओटा शाख गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको जानकारी दिएको छ । समीक्षा वर्षमै काठमाडौं, ललितपुर र भुक्तपुरभित्रका विभिन्न पाँच स्थानमा नयाँ शाखा खोल्ने योजनासमेत बैंकको छ ।
2019-03-14 - 106 view(s) - abhiyan